शिक्षाको विकासमा निजी विद्यालयहरुको योगदान के ? लकडाउन खुलेपछि पछि के गर्ने ? – Upahar Khabar
शिक्षाको विकासमा निजी विद्यालयहरुको योगदान के ? लकडाउन खुलेपछि पछि के गर्ने ?
प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७७, मंगलवार १४:०४ April 28, 2020
विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको अवधिमा देशमा कतिपय आयोजनाहरु ठप्प छन् । अर्थतन्त्रमा ठूलो संकटा आउने देखिन्छ । यो सँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या पैदा भएको छ । एसईई देखि उच्च शिक्षा सम्मका परीक्षाहरु स्थगित भएका छन् भने नयाँ शैक्षिक सत्र नै भत्किने खतरामा छ । तर जेठ महिना सम्म एसईई गराउन सके शैक्षिक सत्र नभत्किने शिक्षा मन्त्रि गिरिराजमणी पोखरेलले पटक पटक भनिरहेका छन् । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा प्रविधिको खासै विकास भएको देखिदैन तर पनि अनलाईन शिक्षणका कुराहरुको पनि बहस चहिरहेको छ । यिनै विभिन्न जिज्ञासा मेटाउन उपहारखबरकर्मी डम्बर मिश्रले एन प्याब्सनका केन्द्रीय सल्लाहकार पाण्डव हमालसँग विशेष कुराकानी गरेका छन् ।
रौतहटका थप २ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको संख्या ५४ पुग्यो